Kana Saudi Crown Prince neSpanish PM vachitaura zvinogona kuve zvakakosha UNWTO bhizinesi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Kana Saudi Crown Prince neSpanish PM vachitaura zvinogona kuve zvakakosha UNWTO bhizinesi
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Basa raSaudi muWorld Tourism, uye iyo UNWTO Headquarter inofamba kubva kuSpain ichienda kuSaudi Arabia inogona kunge yakakwira padanho rekufona nhasi. Kudanwa pakati peSaudi Crown Prince Mohammed bin Salman uye Mutungamiriri weSpain, Pedro Sánchez nhasi anovhura nzvimbo yekufungidzira nezveramangwana rekushanya kwenyika.
Sezvakataurwa mune yakafanana chinyorwa na Arab News uye Saudi Gazette nhasi, Crown Prince Mohammed bin Salman anobva kuSaudi Arabia akataura neMutungamiriri weSpain Pedro Sánchez neMuvhuro.
Vakakurukura hukama hwenyika mbiri pakati peSaudi Arabia neSpain uye nzira dzekudzisimudzira.
Nyanzvi dzinotarisira kuti chimwe chezvikonzero zvakakosha zvekukurukurirana kwepamusoro yaive chirongwa cheSaudi Arabia chekuronga kufambiswa kweWorld Tourism Organisation kuRIyadh.
Kufambisa iyo UNWTO HQ kubva kuSpain kuenda kuSaudi Arabia haisati yave pane ajenda yeiyo iri kuuya yeUNWTO General Assembly yakarongerwa munaNovember kuMorocco.
Ruzhinji rwenhengo dzeUNWO dzinofanirwa kuvhota pane chakadai.
Kufamba uku kwakamiswa kana kutangwa nhasi, apo Crown Prince weSaudi Arabia Prince Mohammed bin Salman akataura neMutungamiri weSpain, Pedro Sánchez parunhare?
Zvinozivikanwa kuti nyaya dzakakosha dzekushanya kazhinji hadzi sarudzwe nemakurukota ezvekushanya, asi nevatungamiriri veHurumende kana padanho remutungamiri wenyika.
Spain inogara iri Executive Executive ye UNWTO. Kana kuenda kuHumambo hweSaudi Arabia kukava kwechokwadi, Saudi Arabia ichave inogara iri nhengo. Iri raizove rimwe danho rakakosha rekutonga munyika yekushanya.
Tourism ndiyo indasitiri yakakosha kune vese Spain neSaudi Arabia, asi pasina kupokana, Saudi Arabia yanga ichiuya kuzonunura chikamu chepasirese panguva yedenda repasirese nemabhirioni akadyarwa nekupihwa.
Saudi Arabia yatove inzvimbo yedunhu UNWTO nzvimbo, pamwe nenzvimbo yedunhu yeWTTC.
Nhengo dzeUNWTO inyika dzinomiririrwa nemakurukota ezvekushanya. Nhengo dzeWTTC dzinounza indasitiri yepasirese yakazvimiririra yevanoshamwaridzana vanobatana pamwechete.
UNWTO ine bhajeti diki. Kutungamira iyo yepasirese yekufambisa uye indasitiri yekushanya kubva mudambudziko razvino inoda bhajeti hombe kwazvo. Inodawo nzira iri nani hutungamiriri pane saiti yeUNWTO.
Izvo zvingadai zvakaonekwa makore mashoma apfuura sezvisingagone, zvinogona ikozvino kuve chokwadi. Nyika dzekushanya-dzinovimba nyika dziri kupererwa. Vanosuwa mari nehutungamiriri. Saudi Arabia inogona kupa zvese.
Kwese kunowoneka Gurukota rezvekushanya muSaudi Ahmed Al-Khatee, ndiye VIP wekutanga. Nyika inodaidza 911 uye Saudi Arabia yanga ichidaira nguva dzose mudambudziko iri. Gurukota reSaudi rapinda musangano wega wega weUNWTO wedunhu kusvika pari zvino.
Izvo zvakafanana hazvigone kutaurwa kuSpain. Chete apo Spain paakaona kutyisidzira chaiko kwekurasa Headquarter yeUNWTO, Spain ndiyo yakazouya kumusangano wedunhu weAfrican musangano kuCabo Verde. Africa ine nyika dzakasununguka makumi mashanu nemana, mazhinji acho ari kuvhota nhengo dzeUNWTO.
eTurboNews akatanga kutaurisa nezvehurongwa hwekufambisa UNWTO muna Chikunguru. Muchinyorwa chino, eTN yakataura kutama kwemuzinda weUNWTO kubva kuMadrid kuenda kuRiyadh kwaizosimbisa United States yeHurumende.
Spain nenyika zhinji dzeEU hadzisi kufara nezve Saudi Arabia kutora chinzvimbo chakakosha kudaro munyika yekushanya. Vanouya nechinhu chero chipi zvachom kodzero dzevanhu kusvika Gunyana 11, kana uchifambisa kurwisa danho rakadai neSaudi Kingdom zvinehunyanzvi.
Kufambisa kwakadaro kwekudyidzana zvakadaro kwakatambwa pamativi ese. Saudi Arabia yanga ichishanda kutenderera pasirese uye kuseri kwechiitiko ichitsvaga zvirongwa zvayo.
Kufona kwanhasi kunogona pakati peMutungamiriri weSpain neMuchinda weSaudi Crown anogona kunge anga ari aizi.
Nzira iyo Spain neSaudi Arabia yaigona kusimudzira kudyidzana uye hukama hunogona kungofungidzirwa panguva ino chaiyo.
Svondo 20, 2021 pa 13: 18
Izvi zvichave, kwete chete kukanganisa asi chinotyisa. Kwete izvi chete zvichave zvisina maturo, asi zvinopesana.
Zvirinani kuva wega pane ipapo uine kambani yakaipa.
Ini handigone kufunga nezvekuenda kune ino nyika zvine chekuita nemusangano, ini ndichitya vanhu vanozoshanda ikoko.
Zvingave kana vachindibhadhara miriyoni imwe maEuro pamwedzi, ndinofunga kuenda kwevhiki.